परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण :एजेन्डाभन्दा व्यक्तिमाथि हमला, खासमा यो हुनुपर्ने हो मसला
बिल गेट्स त्यो नाम हो जब हामी कम्प्युटरको बारे सोच्छौं तव उनलाई सम्झिन्छौ। उनलाई कम्प्युटरको पिता मानिन्छ।
उनी माइक्रोसफ्ट, विश्वको सब भन्दा ठूलो कम्प्यूटर सफ्टवेयर कम्पनीको मालिक हुन । गेट्स एक सफल उद्यमी, लगानीकर्ता, समाजसेवी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर र आविष्कारक हुन ।
उनले आफ्नो सबै आविष्कारहरू र जीवनको हरेक क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोगको कल्पना गर्न एक दूरदर्शी दृष्टिकोणको साथ कम्प्युटरलाई घरेलू उत्पादनमा रूपान्तरण गरे।
विश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनी माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्स संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् । ६४ वर्षका गेट्ससंग १ सय १० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् १ सय २५ खर्ब ४० अर्ब सम्पत्ति रहेको छ ।
धनी व्यक्तिहरू केही काम नगर्ने, काम गर्नका लागि प्रशस्त नोकरहरू राख्ने, साथै उनीहरूको जीवन निकै तामझामका साथ बित्ने गर्छ । तर, यति धेरै सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि बिल गेट्स साधारण मानिसजस्तै आफ्नो जीवन जिउनमा विश्वास राख्छन् । मेलिन्डा गेट्स बिल गेट्सकी पत्नी हुन् ।
सन् १९८७ मा मेलिन्डा बिल गेट्सकै कम्पनी माइक्रोसफ्टमा काम गर्दा यी दुईको भेट भएको थियो । र, काम गर्दागर्दै नजिक भएपछि सन् १९९४ मा यी दुई वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका थिए । उनीहरूको विवाह भएको २५ वर्ष भइसकेको छ । यी दम्पत्तिले विगत २५ वर्षदेखि हरेक दिन आफैँ खाना पकाउनुका साथै सधै भाँडा माझ्दै आइरहेका छन् ।
धनी भएर दर्जनौं नोकर राख्न सक्ने क्षमता भए पनि सधैँ आफ्नो श्रीमतीलाई काममा सघाएर यो जोडी उदाहरण बनेको छ । चर्चित मिडिया ‘बिजनेस इन्साइडर‘का अनुसार आम मानिसले झैँ साधरण जीवन बिताएका यी जोडी प्रायः आफ्नो खाना आफैँ बनाउँछन् अनि सँगै भाँडा माँझ्छन् ।
परिवारमा खुसी ल्याउने मुख्य कारणमा पति–पत्नीले काम बाँडफाँड गरेर संगै गर्नुपर्ने कुरामा मेलिन्डा विश्वास गर्छिन् । त्यसैले, उनीहरूमा माया र समान आदर रहेका कारण उनीहरूको सम्बन्ध मजबुत भएको देखिन्छ ।.
दु:ख, चिन्ता र भयबाट मुक्त हुन याद गर्नुपर्ने केही कुराहरु
संसारको दुर्लभ घटना : कृत्रिम मुटु झोलामा बोकेर हिड्ने यी साहसी महिला (फोटोफिचर)
मलाई असाध्यै मन परेका डा. योगी विकाशानन्दका अमृत बाणीहरु
मार्मिक कथा – उ मेरी बुहारी मात्र होइन, मेरी छोरी पनि हो !